မြန်မာအလုပ်သမားများကွန်ယက်: June 2012
အလုရှင်နှင့် အလုပ်သမား ညှိုနှိုင်းမှု ပြီးဆုံး
မဲ့ဆောက် မြို့ပိုင်ရုံးအနီး ROYAL TEX. CO. LTD (ဘန့်နုရာ သိုးမွေး) စက်ရုံတွင် 29 .5. 2012 ရက်နေ့တွင်း အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
ဆန္ဒပြသည် အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ အလုပ်သမားများသည် လက်ရှိ ဒါဇင်ကြေးမှာ အဆမတန် နည်းပါးနေသောကြောင့် ဒါဇင်ဈေးတိုးမြင့်ရေးနှင့် အကယ်၍ ဒါဇင်ဈေး မတိုးမြင့်ပေးနိုင်ပါက ဒါဇင်စား(အထည်ကောက်) မှ နေ့စား အလုပ်သမားအဖြင့်ပြောင်းပေးရေးတို့ဖြစ်သည်။
စက်ရုံရှိအလုပ်သမားအများစုမှာ ဒါဇင်စားအလုပ်သမားများဖြစ်ပြီး အလုပ်ချိန် မနက် 8 နာရီမှ ည 10 နာရီအထိ လုပ်ခမှာ 1 လ လုပ်အားခစုစုပေါင်း 1500 ဘတ်မှ 1900 ဘတ်အလွန်ဆုံးသာရရှိသဖြင့် ဈေးနှုန်းတိုးမြင့်ပေးရန် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အလုပ်သမားများသည် အောက်ပါ တောင်းဆိုချက်များကို တောင်းဆို တင်ပြခဲ့သည်။
1 - ဒါဇင်ကြေးတိုးပေးပါရန်နှင့် ညနေ6နာရီ နောက်ပိုင်း OT (အချိန်ပို)ကြေးပေးပါရန်၊ တနင်္ဂနွေနေ့အလုပ်ဆင်းရပါက လုပ်အားခ ကို ဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း2ဆပေးရန်
2 - ဒါဇင်ကြေးကို မတိုးပေးပါက နေ့စားခ (225) ဘတ် နှင့် OT ကြေး 1 နာရီလျှင် (25) ဘတ်ပေးပါရန်နှင့် ရာခိုင်နှုံးကြေ3းရာခိုင်နှုံး ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ပေးရန် တို့ဖြစ်သည်။
ထိုတောင်းဆိုချက်နှစ်ချက်ကို စက်ရုံရှိအလုပ်သမားများအားလုံး (125 ယောက်) မှ လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
အလုပ်သမားများ၏တောင်းဆိုချက် စာကို အလုပ်ရှင်သို့ တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း အလုပ်ရှင်မှ မည်သို့မှ မလိုက်လျှောသည့်အပြင် အကယ်၍ အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါက မိမိဆန္ဒအလျှောက် ထွက်သွားနိုင်ကြောင်းပြောဆိုသဖြင့် အလုပ်သမားများမှာ မကြေနပ်၍ အလုပ်မဆင်ပဲ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
30 ရက်နေ့ ည9နာရီခွဲခန့်တွင် အလုပ်သမားများသည် မြန်မာအလုပ်သမားများကွန်ယက်သို့ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလာသဖြစ် အလုပ်သမားများနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး လိုအပ်သည့်အကြံဉာဏ်များ ပေးခဲ့ပါသည်။
31 ရက်နေ့ နံနက်တွင် အလုပ်သမားများမှာ အလုပ်ဆင်းရန် စက်ရုံသို့သွားရာ အလုပ်ရှင်မှ အလုပ်ပေးမဆင်းသဖြင့် အလုပ်သမားများမှာစက်ရုံဝန်းအတွင်းမှာပင် အုပ်စုလိုက်ထိုင်နေခဲ့ကြပါသည်။
နံနက် 93း0 နာရီခန့်တွင် အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်3ဦး ထွက်လာပြီး မြန်မာအလုပ်သမားများကွန်ယက်သို့ အကူညီတောင်းခံခဲ့သည်။ 10 နာရီ 30 ခန့်တွင် မြန်မာအလုပ်သမားများကွန်ယက်မှ ဦးဆောင်၍ အလုပ်သမားကာကွယ်ရေးရုံး (စ၀ါတီကန်) သို့ သွားရောက် အလုပ်သမားများ၏တောင်းဆိုချက်များကို တင်ပြ အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ အလုပ်သမားကာကွယ်ရေးမှ အရာရှိမှ အလုပ်ရှင်နှင့် သူသွားရောက် ဆွေးနွေးပေးမယ်ပြောပါတယ်။ အလုပ်သမားကာကွယ်ရေးရုံမှ တာဝန်ရှိသူက7– 6- 2012 (ကြာသပတေး) နေ့တွင် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများအား အလုပ်သမားကာကွယ်ရေးရုံးတွင် ညှိနိုင်းတွေ့ဆုံရန်အတွက် ချိန်းဆိုလိုက်ပါသည်။ အလုပ်သမားများအနေနှင့် အလုပ်ပြန်ဆင်းရန်နှင့် အလုပ်သမားတွေတောင်းဆိုသည့်အချက်ကို သူ့အနေနှင့် အလုပ်ရှင်နှင့် ဆွေးနွေးပေးမည်ဟုပြောပါသည်။
1 . ရက်နေ့ မနက်တွင် အလုပ်သမားများ အလုပ်ပြန်ဆင်းရပြီး.. အလုပ်ရှင်မှ အစည်းဝေးခေါ် ညှိနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အလုပ်ရှင်မှ အလုပ်သမားများအား နေ့စားခ တရက်ကို 150 ပေးမည်နှင့် အလုပ်ချိန်အတွင်း သူတို့သတ်မှတ်ထားသည့် စံနှုန်းအတိုင်း ပြီးအောင်လုပ်ပေးရန်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တနင်္ဂနွေ အလုပ် မဆင်းရသည့်ရက်တွင် ထမင်းမပေးတော့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အလုပ်သမားများမှ ကျေနပ်မှုမရှိခဲ့ပေ..။
7 ရက်နေ့တွင် စက်ရုံပိုင်ရှင်နှင့် ကိုယ်စာလှယ်5ဦး၊ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်7ဦး နှင့် အလုပ်သမားကာကွယ်ရေးရုံး(စ၀ါတီကန်)မှ တာဝန်ရှိသူတို့ မနက် 10 နာရီတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
တဘက်နှင့်တဘက် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ညနေ4နာရီ အချိန်ခန့်တွင် အောက်ပါသဘောတူညီမှုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
1 . ယခင် ဒါဇင်စား (ပုတ်ပြတ်စား) အဖြစ်မှ နှစ်ဘက်သဘောတူညီ၍ နေ့စားအဖြစ် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
2. နေ့စားခကို ရေ၊ မီး၊ အဆောင်၊ ထမင်းဖိုး စသည်တို့ဖြစ်တောက်ပြီး နေ့စားခကို 155 ဘတ် တန်းတူရရှိမည်။
3. အချိန်ပို ( OT ) ကြေးကို တနာရီလျှင် 10 ဘတ် နှုံးဖြင့် သတ်မှတ်လိုက်သည်။
4. တနင်္ဂနွေ အလုပ်ဆင်းခိုင်းပါက နေ့စားခကို2ဆပေးရမည်။
5. အလုပ်မရှိသည့် နေ့များတွင် 50 ဘတ်ကို အလုပ်ရှင်မှ ပေးရမည်။
6. တနင်္ဂနွေနေ့ အလုပ်ပိတ်ရက်များတွင် ထမင်းမပေးပဲ အလုပ်သမားများအား မိမိဘာသာ ချက်စားနိုင်ရန်အတွက် အလုပ်ရှင်မှ ဆန် ပေးရမည်။
ဆိုသည့် အချက်6ချက်ကို သဘောတူညီခဲ့သည်။
အထက်ပါ သဘောတူညီချက်သည် 8 –6– 2012 (သောကြာ) နေ့တွင် စတင် အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။
Posted by မြန်မာအလုပ်သမားများကွန်ယက် at Friday, June 08, 20120comments
အိုမီကာစက်ရုံမှ အလုပ်သမားများ နေ့စားခ တိုးမြှင့်ပေးရန် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှု အောင်မြင်
နေ့စားခနည်း၍ မေလ (၁၆) ရက်ကနေ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသော အိုမီကာအောက်စက်ရုံမှ ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာ အလုပ်သမားများသည် ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် ၆ ဦးနှင့် စက်ရုံမန်နေဂျာတို့ ညှိနှိုင်း၍ နေ့စားခ ၂၂၆ ဘတ် ပေးရန် သဘောတူညီမှုကိုရရှိပြီး အလုပ်သမားများ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှု အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရ အလုပ်သမားတစ်ဦးကို တစ်ရက်လုပ်အားခ ၂၂၆ ဘတ် ထားရှိပြီး ယခုအိုမီကာစက်ရုံမှ အလုပ်သမားများသည် တစ်ရက်လုပ်အားခ ၂၂၆ ဘတ်ကို ရရှိသည့်အတွက် စက်ရုံမန်နေဂျာက OT(အချိန်ပို) လုပ်ရန် မခေါ်တဲ့အပြင် စက်ရုံမှာလည်းနေခွင့်မရှိဘူး။ အပြင်မှာ မိမိဘာသာနေထိုင်ရမည်၊ အစားအသောက်ကိုလည်း မိမိစရိုက်နဲ့ချက်စားရမည်၊ လုံခြုံရေးအတွက်ကိုလည်း မိမိဘာသာ တာဝန်ယူရရမည်ဟု အလုပ်သမားတစ်ဦး ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
အခုလိုမျိုး ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့် စက်ရုံပိုင်ရှင် သူဌေးတို့အကြား ပဋိပက္ခတွေကို စဝပ်ဒီးခါ့ရုံး၊ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင် ကိုပီတာနှင့် ရောင်ခြည်ဦးအလုပ်သမားအဖွဲ့ရဲ့ အဓိကတာဝန်ခံ ထွန်းနိုင်တို့က ဦးဆောင်ပြီး ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးတဲ့အပြင် အလုပ်သမားများကို စက်ရုံမှတာဝန်ယူလုပ်ဆောင် မပေးတဲ့အရာတွေကို သူတို့က တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်ကိုလည်း သိရှိရသည်။
တစ်ရက်လုပ်အားခ ၂၂၆ ဘတ် ရရှိသည်နှင့်ပတ်သတ်၍ ကျေနပ်မှုရှိမရှိ အလုပ်သမားတစ်ဦးကို Arakan Times က မေးမြန်းသောအခါ သူကအခုလိုပြောပြသည်။ " ကျနော်ကတော့ အရမ်းကိုကျေနပ်အားရ ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တရားဥပဒေသတ်မှတ်ချက်အရ တစ်ရက်လုပ်အားခ ၂၂၆ ဘတ် ရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မဲဆောက်မှာ ဘယ်စက်ရုံမှ မရဖူးတဲ့နေ့စားခကို အခု ကျနော်တို့ ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင်း ပျော်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အလုပ်သမားများတွေကို အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ စဝပ်ဒီးခါ့ရုံး၊ ကိုပီတာနှင့် ရောင်ခြည်ဦး အလုပ်သမားအဖွဲ့ကိုလည်း အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ " ဟု သူက ပြေသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့သည် တစ်ခြားမြို့များထက် အလုပ်ခလစာနည်းပါးနေသည့်အတွက် အခုလိုမျိုး စနစ်တကျ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ရာမှ အောင်မြင်မှုကိုရရှိခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။ ဆန္ဒပြနေသည့် ရက်ပိုင်းများတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခရီးစဉ်မှာ ထိုင်းဝန်းကြီးချုပ် ယင်လတ်နှင့် အလုပ်သမားအရေးကိစ္စကို အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် အလုပ်သမားများတွေ ချော့ချော့မော့မော့ အဆင်ပြေသွားတာဖြစ်တယ် ဟု ဆန္ဒပြအလုပ်သမားတွေက ပြောဆိုနေသည်။
Posted by မြန်မာအလုပ်သမားများကွန်ယက် at Thursday, June 07, 20120comments
အိုမီကာစက်ရုံမှ အလုပ်သမားများ နေ့စားခ တိုးမြှင့်ပေ...